I-3d Marble Carving, Ikholomu Yemabula, Iphethini leMabula - Inkanyezi Morning
I-3D Eqoshiwe Itshe-Wall & Ubuciko
Imabula Yamanzi-jet Inlay
Ifenisha yeMarble-Ithebula Nobuciko
uzohlala unikezwa inani langempela lamatshe emvelo
Inkanyezi yasekuseni izinikele kakhulu ekwakhiweni kwamatshe emvelo. Ngamunye oseMorningstar ufundiswe kahle ngokubaluleka nokuhluka kwengcebo uqobo lweNdalo. Umugqa wonkana wonke wenzelwe futhi ucatshangwe kahle ngaphambi kwanoma yimiphi imikhiqizo yangokwezifiso ezokwenziwa. Sineqembu lethu elikhuthazayo lokudayisa ezitolo elizosiza ekuqapheliseni ukwakhiwa kobuciko kusuka kumakhasimende ethu kuya esigabeni esisebenzekayo.
Ubuhle betshe lemvelo buhlala budedela ubukhazikhazi balo obungapheli nobungoma
UKUQOQWA KWAMATSHI EMVELO
Uyini umehluko phakathi kwemabula yemvelo nemabula yokufakelwa?
Njengoba sonke sazi, imabula ingumkhiqizo omuhle webanga.Ngenxa yalokho imindeni eminingi isebenzisa imabula ekuhlobiseni kwayo, futhi imabula inemabula yemvelo nemabula eyimbumbulu. Futhi noma ngabe imabula yokwenziwa noma i-natu ...
29 Dis, 2020
Izinzuzo zokuphikisana nemabula
Abantu abaningi bakhetha ukusebenzisa ama-countertops we-marble ngenxa yokubukeka kwayo okuhle nezici eziningi ezinhle kakhulu. Okokuqala, ubulukhuni obuphezulu.Akulula ukusonteka.Imabula yemvelo ukudlula iminyaka emide ukwakhiwa ...
15 Dis, 2020
Ukusetshenziswa kwempahla yasemkhathini kuletha njalo okusha, futhi izinto zokwakha ezahlukahlukene ziye zangena kancane kancane embonweni wethu. Ubuhle bemabula abukapheli kusukela ezikhathini zasendulo. Imabula o ...
09 Dis, 2020
I-Xiamen Morningstar Stone Co., LTD yasungulwa ngoNovemba 23, 2017 futhi yabhaliswa eXiamen, idolobha elihle eliyisiqhingi, ikakhulu elihlanganyela kuzo zonke izinhlobo zemabula yanamuhla, igwadle, amakholomu amise okhethekile, njll. Futhi ine ...
24 Septhemba, 2019
Ungaxhumana nathi lapha futhi sizoba nomuntu ozobuyela kuwe kungekudala!
Igumbi 1103, Isakhiwo B, iHengyuan Elite Mansion 1985, Mupu Road 101, Huli District, Xiamen, China